Inona avy ny tombontsoa azo avy amin'ny mari-pahaizana certificat etical (CEH) voafaritra
Tombontsoa ho an'ny fanamarinana CEH
Ampitomboy ny fahaizanao misaina amin'ny loza sy ny vulnerabilities
Asehoy ny fomba hanamboarana ny fomba fisainan'ny hacker
Tsy hoe sarobidy fotsiny ho an'ny tetezana mihodina
Mampitombo ny karamanao amin'ny fanamarinana CEH
Ho hitanao ny fomba fampiasana fitaovana hacking tena
Ny fomba mahomby indrindra hahazoana ny fanamarinana CEH anao haingana
Ho lasa mpihazakazaka ara-tsosialy marim-pototra amin'ny Andro 5 tsotra fotsiny
Herintaona lasa izay, ny tranokalam-baovao momba ny teknolojia fanta-daza, Beta News, dia niresaka momba ny fomba fiasan'ireo hacking ara-poko. Ny lahatsoratra dia nanondro ny fisehoan-javatra iray teo amin'ireo certifications fitsapam-pahaizana mipetaka indrindra, ny Certified Ethical Hacker (CEH).
Ny CEH no sora-pitsipika voalohany mba hametrahana fepetra henjana ho an'ny vondrona maromaro amin'ny mpitsidika momba ny IT; manome ny fianarana andrasana amin'ny fiheverana ara-drariny sy ny fanehoan-kevitra amin'ny fomba famotehana cyber.
Noho ny lazan'ity fanamarinana ity dia maro ireo matihanina manerana izao tontolo izao no mikasa ny hanatanteraka izany. Raha toa ka mieritreritra momba ny CEH ianao, dia mila mahafantatra ireo tombony alohan'ny handraisanao ny lanjanao sy ny volanao.
Ireo no ilay tombony amin'ny fanamarinana CEH:
Ny CEH dia hanohana ny fanonerana anao
Ampio ny asam-piarovanao
Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava ny iray amin'ireo antony ireo isika. Vakio ny ao anatiny sy ny ivelany hahalalanao ny antony tokony hanatanterahana ny fanamarinana. Inona ny tombontsoa CEH?
Mpitsoa-ponenana ireo mpisoloky cyber ary mitady fomba fijery tsara kokoa hamelezana ny fotodrafitrasa IT ary hampiasa ny fahalemena.
Raha tsy misy ny fampahalalana momba ny loza sy ny vulnerabilities mifandraika amin'ny rafitra PC anao, dia hanana fotoan-tsarotra ianao raha mitandrina azy ireo.
Amin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ny fanadinana CEH, dia ho hitanao fa ny mpitsikilo dia manadihady ny rafitrao mba hanapa-kevitra raha tanjon'ny fanafihana ianao. Ireo modely fototra ao amin'ny CEH dia hampiseho aminao io fomba fanao io, ka azonao atao ny mampihatra ny vaovao amin'ny orinasanao:
Module 1: Fampidirana amin'ny hacking etika
Module 2: Fanitsiana sy fanabeazana
Module 4: fitanisana
Ireo sehatra ireo dia miorim-paka ary mametraka fototra mafy orina amin'ny fahitana ny fiantraikan'ny vondron'olona amin'ny fiaraha-misakafo isan'andro.
Fanatanterahana ny Fanamarinana CEH manome "mato-bozaka fotsy" IT matihanina amin'ny fahatakarana amin'ny fomba fijery mpanao heloka bevava cyber.
Raha manao ny ady amin'ny mpanao heloka bevava cyber amin'ny findramam-pahefana dia miankina amin'ny fandraisana andraikitra manoloana ireo loza sy ny toe-javatra mitranga rehefa mitranga izy ireo, dia zava-dehibe kokoa ny mijery ny fomba fitarin'ireo mpanao ratsy ireo ny fanafihana sy ny teknika amin'ny antsipiriany.
Amin'ny alalan'ny famaritana ny fomba hanamboarana ny fomba fisainan'ny mpanao hosoka, dia hanana fahafahana hanaraka tetik'ady mavitrika ianao, hijery ny teknôlôjia misy anao sy ny fandaharam-potoanao hanamarina faritra izay mety tsy ho zakan'ny mpanao heloka bevava aterineto.
The Fanamarinana CEH dia tsy natao fotsiny ho an'ny fampihorohoroana. Ity mari-pamantarana manaitaitra ity dia tonga lafatra amin'ny fiarovana IT sy ny matihanina amin'ny rafitra.
Raha toa ianao ka manam-pahaizana momba ny fitantanana ny rafitra, dia manana ny mari-pamantarana tonga lafatra ianao mba hanangonana ny fianarana momba ny fiarovana amin'ny serasera amin'ny CEH. Ny tena zava-misy marina amin'ny fampianarana ao amin'ny CEH dia ho tonga lafatra ho anao sy ny vondrona misy anao mba hiantohana ny rafitrao amin'ny jiolahy cyber.
Eny tokoa, na dia miomana amin'ny IT professionals aza ny hamporisika ny CEH. Amin'ny fotoana fohy izay noraisinao ho fanamafisana ny fanamafisana ny fanjakana, mitovy amin'ny CISSP (ISC) 2, ny CEH dia hamory ny fampahalalana momba ny fiarovana ny rafitrao - tonga lafatra rehefa tafiditra amin'ny fahazoan'ny hypothesis sy ny fahaiza-miasa ara-panjakana miasa amin'ny CISSP.
Ny fanatanterahana mari-pankasitrahana iray amin'ny sehatra indostrialy dia tsy azo iadian-kevitra amin'ny fahaiza-manaonao ary mety ho manan-danja amin'ny fifindrana ho amin'ny fanonerana ny ampahany vaovao.
Ny karama ara-dalàna ho an'ny matihanina amin'ny fanamarinana CEH dia £ 55,000, araka ny fanazavana avy amin'ny ITJobsWatch. Izany dia mitombo ho £ 67,500 sy £ 87,000 ho an'ny mpandaha-pifaninana ary ny fizarana ny mpilatsaka an-tsehatra ny fizarana tsirairay.
Ny sary etsy ambany dia mampiseho ny fanonerana ara-dalàna ho an'ny matihanina manam-boninahitra CEH, ny tsy maintsy atao amin'ny ITJobsWatch.
Amin'izao fotoana izao, raha ny marina dia efa nahavita nanorina tambajotra matihanina tao amin'ny IT ianao ary nahafantatra ny fiasan'ny tambajotra ao anaty fiarahamonina (mety ho azonao ny mari-pahaizana A + sy Network + an'ny CompTIA, ohatra) - ny CEH dia afaka manome anao fomba fambolena anao ao amin'ny fiarovana IT.
Arakaraky ny tsy fahafahanao mipetraka ao amin'io toerana io ary mila manongana ny ampahany solosaina ao anaty fiarovana cyber, dia diniho ny fanatanterahana ny CEH eo akaikin'ny serivisiran'ny Security Policy CompTIA +. Ny CEH dia hamolavola ny fomba fijerinao amin'ny fitaovana sy ny rafitra ampiasaina amin'ny hackers, raha toa kosa ny Security + dia hanome anao ny fototry ny fianarana momba ny fandriampahalemana.
Raha toa ianao ka efa nahitanao ireo fitaovana hacking sasany mba hamoronana ny traikefanao (na hanatanterahana ny fahalalanao), dia tsy azo inoana fa nampianarina ny ao anatiny sy ny fianarana izay takiana mba hampiasa sy hahatakatra ireo fitaovana ireo.
Amin'ny lafiny rehetra, amin'ny alalan'ny CEH no hahafantaranao ny fomba fampiasana ireo fitaovana ireo - ny fianarana ara-pitsaboana ara-pitsaboana dia hampiditra ny fahazoana mankany amin'ny laboratoara tena marina 140 ary mihoatra noho ny fitaovana hacking 2,200.
Ny famaritana ny fomba fampiasan'ny mpamono vintana mampiasa fitaovana samihafa dia manome fahafahana anao hahazo antoka tsara kokoa ny tambajotra, fampiharana ary loharano samihafa.
Miomàna amin'ny vahaolana momba ny teknolojia vaovao momba ny fitsaboana ara-pihetseham-po ara-pananahana ary ho zaraina amin'ny andro 5 ianao.